Xiro gabaya casaan ah oo loogu talagalay Sannadka Cusub ee Shiinaha
Dhaqanka labbiska labbiska labbiska ee casriga ah inta lagu jiro sannadka cusub ee Shiinaha
Waxaa jira noocyo kala duwan oo xiiso leh oo ku saabsan dabaaldegga sannadka cusub ee Shiinaha. Marka laga soo tago iibinta dharka cusub, bixinta bokisyada gaduudan iyo wax badan cunid (waxaan ula jeedaa wax badan) qoyskaaga iyo asxaabtaada, waxaan qabaa inaan jeclahay caadada ugu haboon ee casriga ah ee ugu fiican.
Haddii aad gudaha ku jirtay dukaanka Shiinaha laga bilaabo Diisambar ilaa Febraayo , waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso qaabka jiilaalka qariibka ah ee ku hareereysan dharka cas.
Inta badan caanka ku ah qaybta ragga, dhar casaan waa mid ka mid ah hadiyadaha ugu caansan ee lagu jecel yahay in lagu badiyo Sannadka Cusub ee Shiinaha .
Sidaa darteed, ma ahan inaad isweydiin isbeddel heer sare ah oo Asia ah sannadkan. Maya, jiilaal kasta, dhar casaan ah oo lagu qurxiyo daabacaad dahab ah, sida badan oo muujinaysa xayawaan xeebeedka khaaska ah ee sanadkan gaar ah, waxay ku socotaa dukaamada China.
Yaa Casaanaya Casaan?
Sida aad uga warqabto, Shirkadda Shiinaha ee Shiineeyska ah waxay shaqaaleysiisaa wareeg ah 12. Waxaa jira 12 xayawaan oo ku yaal jilibka iyo sannad kasta waxay soo dhoweysaa xayawaan cusub. Dalka Shiinaha, wareegga xayawaanka ayaa sidan oo kale ah: jiir, dibi, shimbir, bakayle, masduula, abeeso, fardaha, idaha, daanyeer, caajis, eey iyo doofaarka. Dadku waxay ku dhashaan hal calaamad oo waxay bilaabi doonaan saxiixooda markale mar labaad 12kii sanoba mar. Sidaas awgeed waa muhiim inaad ka warqabto naani- doonkaaga, ama shirarka sanad-guurada.
Maxaa loo xirxiraa casaan?
Mid ka mid ah waxay u maleyneysaa in sanadkaagu uu noqon doono mid wanaagsan.
Laakiin liddi ku ah, aaminaadda dhaqameed ee Shiinaha ayaa ah in neyngaaga nasiibka ahi uu ka buuxo nasiib xun. Sidaa darteed haddii ay tahay sanadki, waxaad u baahan tahay inaad qaadato dhawr taxadar ah si aad u hubiso in sanadkaagu uusan ahayn mid xun.
Si loo khatro khatarta laga yaabo inay ku dhici karto niqaamkaaga , waxaa caadiyan la rumeeysan yahay in ay caawineyso in la xidho casaanka casaanka.
Red waa mid ka mid ah midabada ugu khatarsan ee dhaqanka Shiinaha, oo u taagan daacadnimada, guusha iyo farxada. Waxaad arki doontaa gaduud dhan meel walba inta lagu guda jiro ciidaha dhaqanka Shiinaha iyo gaar ahaan Sannadka Cusub ee Shiinaha: Foornooyinka casaanka, baqshadaha casaanka, warqadaha casaanka cas. Marka ay timaado qurxinta, wax walba oo ku saabsan wax walba waa casaan iyo qurxin dahab ah.
Sida loo xidho casaan
Haddii aad aamminsan tahay alaabtaas oo aad tahay mid dhaqameed, waa inaad xirataa maalin cas cas, sanadkoo dhan.
Haddii aad tahay mid dhaqameed, waa inaad xirtaa casaan maalin kasta, sanadka oo dhan. Waxaad aadi kartaa weyn: ku dar waxyaabo casaan ah si aad uhesho. Ama waxaad ka ciyaari kartaa mid fudud, xirashada jaakad cute ah oo ka samaysan casaan layskugu duugo shiinaha oo ku wareegsan gacantaada si aad u lumiso nasiib xun.
Laakiin waxaa laga yaabaa inaadan ahayn taageere weyn oo casaanka midabkeedu yahay midabkale oo aanad dooneynin qof walbana inuu ogaado da'daada. Haddaba sidee baad u badbaadin kartaa nasiib daro laakiin waxaad ku haysaa dareenkaaga qaabka aad u leedahay? Daboolka cas cas waa dabcan, jawaabta.
Hababka casaanka ah waa hab sahlan oo looga hortagi karo nafta halista ah ee naannaanta . Waad isku daryeeli kartaa lammaane badan ama weydiiso naxariistaadu inay ku siiso nambarada cusub ee Shiinaha New Year's Eve. Dukaamada, waxaad arki doontaa wax kasta oo ka mid ah nooca Three-Gun ee caanjooga dhaadheer oo ku yaal magaalada Shanghai oo lagu soo bandhigayo casriga casriga ah ee Calvin Klein ee dukaamada qaybta sare ugu dambeysa oo muujinaya waxyaabo casri ah oo casri ah.
Warqadaha loo baahan yahay ee Safarka ee Shiinaha
Dib-u-eegista Dib-u-eegista ee China Airlines
Hordhaca khamriga Shiinaha
Hagaha Booqdaha ee loogu talagalay heesida KTV ee Shiinaha
Sannadka Cusub ee Shiinaha ee sannadka 2017
Sida Loogu Heli Karo Munich ilaa Paris
Free 4th July dhacdooyinka Houston
Xayawaanka Dhulka Rock ee Poconos Pennsylvania
Waxa la sameeyo haddii Mount St. Helens mar labaad dib u dhacdo
La Petite Roche ee Arksansa
Hagaha Munaasabadaha Milwaukee
WaTiki Xarunta Biyaha Biyaha ee gudaha
Miss Mary Bobo Guriga Guddiga
Buug-gacmeedka Puerto Vallarta Guryo-dhaqameedyada iyo Naadiyada Jinsiyada
Makhaayadaha 24-Saacadood ee ugu Fiican Austin
Jimcaha Gawaarida Cuntada Jimciyada Tower Grove Park